Isbahaysiga Marquette Park • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Allies of Marquette Park waa koox daris ah oo u heellan dib -u -hawlgelinta Marquette Park oo ka dhigaysa khayraad aad u qiimo badan bulshada Dutchtown iyo South Side.
Beerta Marquette waa baarkinka ugu weyn agagaarka Dutchtown. Marquette waxay noqon kartaa waana inay ahaataa udub dhexaadka xaafadeena sii kordheysa. Miisaaniyadaha adag iyo dayactirka dib loo dhigay waxay ka dhigan yihiin jardiinada siyaabo badan inay uga maqan tahay. amp waxay raadineysaa inay soo uruuriso xiisaha iyo lacagaha si Marquette Park loo gaadhsiiyo heerarka ay deriskeenu uqalmayaan.
Xilliga xagaaga ee 2019, amp kormeeray jardiinada iyo tas-hiilaadkeeda, iyagoo qaatay tirakoob meelo badan oo u baahan fiiro gaar ah. Waxay sidoo kale sahamiyaan jaarka iyo dadka isticmaala baarkinka si ay u go'aamiyaan horumarka xubnaha bulshada ay doonayaan inay arkaan inta badan.
Bishii Luulyo ee 2019, Xulufada Marquette Park waxay ururiyeen in kabadan $ 7,000 hagaajinta barkadda Marquette Park. Lacagta waxaa lagu bixin doonaa alaabta barkadda iyo ka saarista siligga xayndaabka ku wareegsan si barkadda looga dhigo mid soo dhaweyn leh oo shaqeyneysa. Barkadda Marquette Park waa barkadda ballaadhan ee bannaanka ugu weyn ee magaalada St. Louis.
Deyrtii 2021, Allies of Marquette Park waxay iskaashi la sameeyeen meherado, ururo, deeq -bixiyeyaal gaar loo leeyahay, iyo kooxda St. Louis CITY SC Major League Soccer si ay u rakibaan mid cusub maxkamad futsal ah ee Marquette Park. Raadinta hore, Allies of Marquette Park waxay rajaynaysaa inay sii socoto hagaajinta goobaha kubbadda cagta Beerta la dhigto oo Marquette laga dhigo meel loogu talagalay kubbadda cagta ee St. Louis.
Waxaad awoodi kartaa ugu deeqo ampdadaalka iyada oo loo marayo Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown, Dutchtown's 501 (c) (3) hay'ad horumarineed oo aan faa'iido doon ahayn.
DutchtownSTL.org Isbahaysiga Marquette Park